About Us - Fet Building Zvekushandisa & Technology Co., Ltd.
Wana Fiber Cement Wall Board & compressed Fiber Cement Board Now!
CLICK HERE kukumbira A QUOTE
MAIN Market zvimwe DZEBHIZIMISI TYPE
North America Brands: FET Board mugadziri
South America Kwete revashandi: 200 ~ 300
Western Europe Annual Sales: 15Million-20Million
Eastern Europe Year Chigaro: 2003
Eastern Asia Export yori: 50% - 60%
Ningbo Fet Building Zvekushandisa & Technology Co., Ltd. rakaumbwa muna 2003 muna Ningbo City, riri kumaodzanyemba Shanghai, 50km kubva Ningbo pachiteshi.
Isu tiri zvikuru kwenyanzvi zvaAtemisi internet simende puranga, karusiyamu silciate bhodhi iri China ne 4 automic kugadzirwa lines.Our fekitari ndokwenguva nzvimbo 600,000 mativi metres pamwe wegore anokwanisa 20,000.000 mativi mamita.
Tine matunhu rwokugadzirwa kugutsikana uye vanonzi amachinda zvesayenzi uye kugadzira zvinhu novelty.The zvigadzirwa HIV ne Intertek, SGS, TUV, PSV, redu zvebhizimisi akanga zvatenderwa ISO 9001: 2008 uye ISO14001: 2001, ari unokupai vatengi vari USA , Middle East, Australia, Africa, Europe, South Asia uye zvichingodaro.
Kuwanda isu Export kutora 60% yose kugadzirwa.
Pachokwadi kugamuchira zvakawanda shamwari pamwe nesu!
Ningbo Fet Building Zvekushandisa & Technology Co., Ltd. rakaumbwa muna 2003. With pfungwa "kutungamirira quality, uchityaira utsanzi", kambani yedu akakumikidza kuna kupa yose vatengi tsika dzinoti zvinhu izvo kugutsa kudiwa. Uye ndakasika zvebhizimisi takunda-zvisamumirira pamwe vatengi uye kubudirira inogona kuenderera mberi.
Mumakore gumi apfuura, FET simbisa kukura uye kugadzira kune zvigadzirwa chinogona kupa mushandisi kufara uye fun.With yemhando yepamusoro uye rakasiyana okugadzira zvinhu, FET nguva dzose anoramba achitungamirira chinzvimbo nyanzvi mumunda.
FET uyewo anoteerera chepamusoro munzanga basa apo kukura nokukurumidza; isu nguva dzose yeuka pfungwa kudzivirira zvakatikomberedza panguva zvinhu kushandiswa uye chigadzirwa mukugadzira rikurumidze.
We anoshanda kurimwa zvakasimba maererano ISO9001 uye ISO14001, zvinenge TQC kuti adudzire rakasiyana muchiso pfungwa mukushanda zvizere unyanzvi, basa, zvakatipoteredza noushamwari uye zvikuru kwezvipimo kwendangariro.
Pashure-yakareba kuramba basa rakaoma, FET akagadza simba yokutengesa samambure munyika yose, zvigadzirwa akazadza mumwe County maguta nemisha. Pamisika remarudzi, chekambani vatengi zvakazara kuSoutheast Asia, Europe, America uye kuMiddle East uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
We vanoomerera kumusika vaifarira, kutsigira mashoko muitiro reengineering mberi, kumisa mashoko anotsanangura nzira iyo paakatora mutengi sezvo nepakati, uye uvake pose samambure logistics, mari kuyerera, uye mashoko aibuda. We akabata mweya zvebhizimisi "Kuti kuumba kukosha, uye kuhwina zvisamumirira chichinyatsobatanidzwa", anosika pachavo nyika muchiso the Chinese rudzi uye anoda kukura nokukurumidza somumwe yakanakisisa yose bhizimisi.
Ningbo Fet Building Materials & Technology Co., Ltd. rakaumbwa muna 2003. With pfungwa "kutungamirira quality, uchityaira utsanzi", kambani yedu akakumikidza kuna kupa vatengi yose tsika dzinoti zvinhu izvo kugutsa vade, uye kuumbwa nevamwe muchiso unhu, akasika zvebhizimisi hwina-zvisamumirira pamwe vatengi uye kubudirira inogona kuenderera mberi. Mumakore gumi apfuura, FET simbisa kukura uye kugadzira kune zvigadzirwa chinogona kupa mushandisi kufara uye kunakidzwa. Kubva chete chigadzirwa kune vakawanda chigadzirwa mutsetse development.With yemhando yepamusoro uye rakasiyana okugadzira zvinhu, We nguva dzose anoramba kutungamirira chinzvimbo nyanzvi mumunda.
Tine yakasiyana vomuzana kirasi mugadziri chikwata nokuona dzakawanda, uye akaumba akasiyana unhu uye magadzirirwo manyorerwo uye vaipa mberi pamukwidza kubva chigadzirwa design, chakuvhuvhu kukura, chigadzirwa kugadzira kune muchiso ukoshi hurongwa.
Tine 4 kugadzirwa mitsetse dzakakwirira kushandisa michina pamwero uye vazhinji vepachikoro unyanzvi. We kunyanya dzidzira mu mukugadzira zvakawanda zvinogadzirwa zvakadai fireproof, decoration, UV zvemapuranga, chiedza internet esimende bhodhi uye diatomite kugeza mat.We kunge akawana mukurumbira wakanaka panguva dzokudya uye kunze pamisika.
We anopinda Frankfurt Paperworld Fair nezvakanaka muchiso mufananidzo, uye anogamuchira vatengi kubva munyika yose pamwe yepamusoro zvigadzirwa.
We anopinda Canton akanaka, FET Board anokwazisa yose vatengi pamwe yepamusoro Stationery zvigadzirwa, uye anoratidzawo purchasers pose yakanaka muchiso mufananidzo.
Exterior Wall Colorful Fiber Cement Board , Exterior Wall Fiber Cement Board , Exterior Wall Wood Grain Fiber Cement Board , Fiber Cement Board For Exterior Wall ,